Maqaallo | Heeshi
Jimce, Agoosto 19, 2016 ·	by Idiris M. Cali ·	in Maqaallo	· Faallo u dhaaf
Waxa aynu ahayn bulsho ku tookhda halabuurka maansada, taas aawadeed baa na loogu baxshay, “Umaddii Maansada.” Ma aynaan lahaan jirin faro wax lagu qoro oo baahsan. Taas ayaana qasbaysay in gabyaageennu qaybo tixihiisa. Badanaa dhawr qof oo ka ag dhaw baa u qaban jiray meerisyada uu golayaasha kaga dayaami jiray. Meel walba oo uu istaago, oo […]
Muxammad Cali in uu yahay Geesigii Umadda aniga oo toban jir ah ayaan ka xaqiiqsaday habaryartay Caasha Yuusuf Suldaan (Alle ha dhawro e). Sidii caadada ii ahaan jirtay, goor duhur ah aniga oo dhan uga adeegaya habaryartay dhanna u dhegtaagaya wacaalaha ay duunkayga ku hogatusaalaynaysay ayaan si kadis ah, se mawduucii markaas ku xiriirsan, u […]
Bishintiisa hoose way buuran tahay, oo cas tahay. Wuxuu hilan yahay iskujooggii Afrikada galbeed, oo waa reer Nayjeeriya. Waa iskujoog koofiyaddu na carwaajiis tahay, oo indhaha qaban og. Dhawr jeer baan cidhifkii uu fadhiyay qooraansaday, mise sida aan ugu maqanahay aragtiyaha shirka la isku weydaarsanayo ayuu ugu maqan yahay. “Mar uun baad ogaan wuxuu ka […]
Heesta hoosta ku qoran waxa aan June 21, 2014 kaga qaybgalay xaflad-qalinjabineed (sanadguuradii sagaalaad) oo ka qabsoontay magaalada Boston—xafladdaas quruxda badan oo ay soo agaasimeen bahda SALSI (Somali Association for Literacy & Social Improvement). Heestu waa masafo, leh jaangoynta “heesta-maqasha.” Heestu waa masafo oo waxa ay u taxan tahay bayd-bayd (labo-labo-meeris). Waxa ayna dulucdeedu tahay: […]
Markaad ku tiri, “Shaqayso”; hadduu kugu yiri, “Sadkeey-qoran”: Miyaad gaaggaabsan lahayd, inkastood hoos iyo kor u kuuraysay laxaadkiisa buuxa ee uu Eebbe isagaas ku galladay? Markuu ku halgaadayee, “Alla-aamin ma tihid” kugu sii cirbiyay, miyaad u garaabi lahayd, adigoo hoos isu leh, “Waa runtii, waa runtii, qofna waxaan loo qorin ma qariiro”? Mise adoo taas […]
Hadda ka hor waxaan ku digay, “Mar na ba is ma siin kartid aragti…uu qof kale ku saxiixanyahay”; waxa aanan u digay qofka isagu, xaqsiin la’aan, qoraal amma hadaal uu leeyahay ku googgoosta xogo uusan isku habaysan, amma uusan curinnin, balse uu soo irgistay. Kala shareerista aragtiyaha iyo curiyahooda, oo kama’ loo kala shareero, waxay […]
Barqadii, Koodaar Shacbaan 9, 1434, ayaa waxaan illinka ka furay laba haween ah oo is-dhalay. Hooyada ayaa soo sokaysay, waxayna bariido debadeed ii sheegtay magaceeda iyo magaca gabadheeda. Ka dibna waxay tiri: Waxaan nahay Jehovah’s Witnesses. Waxaan jecelnahay inaan kaala hadalno arrin innaga oo dhan xanuun innagu wada haysa. Waa danninta (prejudice). Aan ku weydiiyee, […]